Nhau - PE pombi inounzwa
Pe pombi inoiswa
PE ndeye polyethylene plastiki, yepurasitiki yakakosha, mabhegi epurasitiki, kuputira epurasitiki, nezvimwewo, ari PE, HDPE chiyero chekristallini, isiri-polar thermoplastic resin. Kuonekwa kweiyo yekutanga HDPE yakasviba machena, iine imwe nhanho yekushanduka muchikamu chakaonda. PE ine yakanakira kuramba kumakemikari mazhinji epamba uye emaindasitiri.
Pe pombi ine yepakati density polyethylene pombi uye yakakwira density polyethylene pombi. Iyo yakakamurwa kuita SDR11 uye SDR17.6 dzakateedzana zvinoenderana nehukuru hwemadziro. Iyo yekutanga yakakodzera kutakura gaseous gasi rekugadzira, gasi rechisikigo uye gasi rakanyungudutswa peturu, nepo iyo yekupedzisira ichinyanya kushandiswa kutakura gasi rechisikigo. Inofananidzwa nepombi yesimbi, maitiro ekuvaka ari nyore, ane kumwe kuchinjika, zvinonyanya kukosha kuti haishandiswe yekurapa-ngura kurapwa, kunoponesa yakawanda nzira. Kukanganisa kwemidziyo hakuna kunaka sepombi yesimbi, kuvakwa kwekukoshesa kuchengetedzeka kwekupisa kupisa nzvimbo, uye haigone kuburitswa nemhepo muzuva, uye inonzwisisika kumakemikari, kudzivirira kubvaruka kwekukuvara kwepombi tsvina. .
China yemasipareti pombi musika, epurasitiki pombi iri kusimuka zvakadzikama, PE chubhu, PP-R chubhu, UPVC chubhu vane nzvimbo, pakati pavo IYO yakasimba kukura kukurumidza kwe PE chubhu ndiyo inonyanya kutora maziso. Pe pombi inoshandiswa zvakanyanya. Pombi yetsvina uye gasi pombi ndiyo misika yayo mikuru miviri yekushandisa.
Iyo yakanaka pombi haifanire kungova nehupfumi hwakanaka chete, asi zvakare iite dzakateedzana zvezvakanaka senge yakagadzikana uye yakavimbika interface, kukanganisa kuramba, kutsemuka kuramba, kukwegura kuramba uye ngura kuramba.
HDPE muridzo unoridzirwa system zvakanakira:
1. Rinovimbika kubatana: polyethylene pombi system yakabatana nekupisa kwemagetsi, uye simba rejoinhi rakakwirira kupfuura simba remuviri wepombi.
2, yakaderera tembiricha kukanganisa kusagadzikana kwakanaka: yakaderera tembiricha embrittlement tembiricha ye polyethylene yakaderera kwazvo, uye inogona kushandiswa zvakachengeteka mukati mekupisa huwandu hwe -60-60 ℃. Mukuvakwa kwechando, pombi haizotsemuka nekuda kwekukanganisa kwakanaka kwechinhu.
3, kushushikana kwakanaka kwekutsemuka kushomeka: HDPE ine yakadzika notch senzwi, yakasimba shear simba uye yakanakisa kukwenya kusagadzikana, kwezvakatipoteredza kushushikana kutsemuka kurwisa zvakare kwakatanhamara.
4, yakanaka makemikari ngura kuramba: HDPE pombi inogona kumira kuora kweakasiyana emakemikari midhiya, kuvapo kwemakemikari muvhu hakuzokonzere chero kudzikisira kwepombi. Polyethylene inogadzirisa magetsi, saka haizoore, ngura kana ngura yemagetsi; Izvo zvakare hazvikurudzire kukura kweye algae, mabhakitiriya kana fungi.
5, kukwegura kuramba, hupenyu hwakareba hwebasa: polyethylene pombi ine 2-2.5% yunifomu yekupararira kabhoni nhema inogona kuchengetwa panze kana kushandiswa kwemakore makumi mashanu, haizokuvadzwa nemwaranzi yeultraviolet.
6, pfeka kuramba: KUSVIRA kupfeka kweHPPE pombi uye simbi pombi yekuenzanisa bvunzo inoratidza kuti kupfeka kuramba kweHPPE pombi inguva ina iyo yesimbi pombi. Mukufambisa kwemadhaka, mapaipi eHDPE anopa zvirinani kupfeka kuramba kana uchienzanisa nepombi dzesimbi, zvinoreva kuti hupenyu hwakareba hwebasa uye hupfumi huri nani.
7. Kugadzikana kwakanaka: KUCHINJIKA kweHPPE pombi kunoita kuti zvive nyore kukombama, uye zvipingamupinyi zvinogona kupfuura nekuchinja iko kweipi pombi muinjiniya. Muzviitiko zvakawanda, iko kushanduka kwepombi kunogona kudzikisa huwandu hwenzvimbo dzemapaipi uye kudzikisa kuisa mari.
8. Yakadzika kuyerera kuramba: HPEP mapaipi ane akatsetseka mukati memukati uye Manning coefficient ye0.009. Iko kusatsetseka kuita uye kusiri-kunamatira hunhu hweHPPE pombi dzinovimbisa yakakwira kuendesa kugona kupfuura yakajairwa tubing, ichideredza kumanikidza kurasikirwa uye kunwa kwemvura.
10, dzakasiyana-siyana nzira dzekuvaka: HDPE pombi ine akasiyana tekinoroji yekuvaka, kuwedzera kune yechinyakare nzira yekuchera inogona kushandiswa pakuvaka, inogona zvakare kushandisa dzakasiyana siyana trenchless matekinoroji senge pombi jacking, inotungamira kuchera, liner, muchimiro chepombi uye nekuvaka, kune vamwe havabvumire nzvimbo dzekuchera, ndiyo yega sarudzo, saka iyo HDPE pombi yakafara mashandiro eminda.